कुन विचारधाराका युवाहरुको सेक्स जीवन राम्रो ? « Deshko News
कुन विचारधाराका युवाहरुको सेक्स जीवन राम्रो ?
सेक्स जीवन विचारधाराबाट पनि प्रभावित हुन्छ । एउटा सर्वेक्षण अनुसार दक्षिणपंथी विचार धाराको व्यक्तिको सेक्स जीवन कम्युनिष्ट विचारधाराको सेक्स जीवन भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ । टेलिग्राफ को एउटा प्रतिवेदन अनुसार यो सर्वेक्षण ‘युगभ’ को तर्फबाट गरेको थियो ।
यसमा ब्रिटेन,स्वीडेन,जर्मनी, फ्रन्स,र डेनमार्क का १९ हजार भन्दा बढी युवा सहभागी थिए । उनीहरुको विचारधारा र सेक्स जीवनलाई लिएर सर्वेक्षण गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा जुन व्यक्तिको विचारधाराको झुकाव दक्षिणपथीं थियो उनको सेक्स जीवन अन्य विचारधारा भएको व्यक्तिको तुलनामा धेरै राम्रो रहेको पाइएको थियो ।
जुन व्यक्तिको विचारधारा वामपंथी थियो उनको सेक्स जीवन धेरै नै खराव भएको प्रमाणित हुनगएको थियो । सर्वेक्षण अनुसार ब्रिटेनमा दक्षिणपंथी विचारधारालाई आत्मासाथ गर्ने ७३ प्रतिशत भन्दा बढी युवा आफ्नो सेक्स जीवनमा धेरै खुसी रहेको पाइएको थियो, भने वामपंथी विचारधारा लाई आत्मासाथ गर्ने युवाहरुको यो प्रतिशत ६६ थियो ।
‘युगफ’को राजनितिक र सामाजिक अनुसन्धानका प्रमुख टायम्यानले राम्रो सेक्सजीवनलाई प्रभावित पार्ने धेरै कारक तत्त्व हुन्छन् भनेर बताए । यो अध्ययनले बताउन सक्दैन केवल राजनितिक जीवन परिवर्तन गर्दैमा सेक्स लाईफ धेरै राम्रो हुनजान्छ । एजेन्सी